လာ့စ်ဗီးဂတ်စ်မြို့မှာ အခြေစိုက်ဖျော်ဖြေပွဲတွေ ပြုလုပ်မယ့် အဆိုတော် ရှနိုက်ယာတွမ်း - Yangon Media Group
အဆိုတော် ရှနိုက်ယာတွမ်းသည် လာ့စ်ဗီးဂတ်စ်မြို့တွင် အခြေစိုက်ဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်နိုင်သည့် အနုပညာရှင်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခွင့်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အသက်(၅၃)နှစ်ရွယ် အဆိုတော်တွမ်းသည် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ‘Let’s Go! The Vegas Residency’ အမည်ရှိ ဖျော်ဖြေပွဲကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ယင်းဖျော်ဖြေပွဲကို Planet Hollywood Resort & Casino ရှိ Zappos ပြဇာတ်ရုံတွင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်မှ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လအထိ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် လာ့စ်ဗီးဂတ်စ်မြို့၌ နှစ်နှစ်ကြာ အခြေစိုက် ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဆိုတော်တွမ်းသည် လေဒီဂါဂါ၊ ဂျက်နက်ဂျက်ဆင်၊ ရော်ဘီဝီလီယမ်နှင့် မရိုင်ယာကာရေးတို့ကဲ့သို့သော ပေါ့ပ်စတားများနှင့်တန်းတူ ယခုနှစ်တွင် ပုံမှန်ဖျော် ဖြေပွဲများ ပြုလုပ်ခွင့်ရသည့်အတွက် လာ့စ်ဗီးဂတ်စ်မြို့သို့ ပြန်လာရန် မစောင့်နိုင်တော့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းင်းက ”အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။ လာ့စ်ဗီးဂတ်စ်မှာ သီဆိုဖျော်ဖြေရမှာ ဂုဏ်ယူရတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ကာလရှည်အခြေစိုက်ပြုလုပ်မယ့် အနုပညာရှင်အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်မှုရတာ တကယ့်ကိုကံကောင်းတာပါ။ ချီတုံချတုံမဖြစ်ပါဘူး။ ဗေးဂတ် မြို့ကို ပြန်လာဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ လူတွေအပန်းဖြေခရီး ထွက်လာကြတယ်။ အချိန်ကောင်းလေးတွေကို ခံစားနေရတဲ့ လူတိုင်းရှိတဲ့ လာ့စ်ဗီးဂတ်စ်မှာ ဖျော်ဖြေရတာ ကျွန်မတကယ် သဘောကျပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ¤င်းသည် ဖျော်ဖြေပွဲ ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းကိုတာဝန်ယူထားပြီး ရွှေပွဲလာတို့အနေဖြင့် ¤င်းနှင့်အတူ ကခုန်နိုင်မည့် အကကြမ်းပြင်ကိုလည်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပုံ ဖော်ထားကြောင်း သိရသည်။
မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ်နယ်မြေ အတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်နှင့် KTV ဆိုင်များ လိုင်စင်ရှိသည်ဖြစ်စေ ??